अन्तर्वार्तामा फेल भएका मावि शिक्षक नियुक्त  OnlineKhabar
शनिबार, ७ असोज, २०७४
अन्तर्वार्तामा फेल भएका मावि शिक्षक नियुक्त
३० असोज, काठमाडौ । माध्यामिक तहको नेपाली विषय शिक्षकका लागि स्थायी पदपूर्ति गर्न सञ्चालित अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्णलाई बाराको एक विद्यालयमा नियुक्त गरेका पाइएको छ । महिला कोटाको अन्तर्वार्ता परीक्षाामा अनुत्तीर्ण सीता अधिकारीले बाराको कलैयास्थित चन्दादेवी माध्यामिक विद्यालयमा नियुक्ति पाएकी हुन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले लिखित र अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण गीता कोइरालालाई सिफारिस नगरी अनुत्तीर्ण अधिकारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । कोइरालाले भने आयोगको बदमासीले आफूलाई अन्याय भएको बताएकी छन् । उनले यस विषयमा गम्भीर छानविन हुनुपर्ने माग राखेकी छन्, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘म लिखित र अन्तर्वार्ता दुवैतर्फ पास भएको लिष्टमा छु,’ गीताले भनिन्, ‘तर, आयोगले फेल भएकी सीता अधिकारीलाई माध्यामिक तहमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो ।’ आयोगले कुनै सूचना प्रकाशित नगरी आफ्नो स्थानमा अधिकारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको उनको भनाई छ । आयोगले बाराका लागि नेपाली विषयमा माध्यामिक तहतर्फ महिला कोटाको लागि सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षामा सीता अधिकारी, गुञ्जाकुमारी गुप्ता र गीता कोइराला उत्तीर्ण भएका थिए । अन्तर्वार्ताको नतिजामा आयोगले गुप्ताको नाम सिफारिस गर्यो । कोइराला वैकल्पिकमा छानिइन् ।
सीता अन्तर्वार्तामा फेल भएकाले नाम प्रकाशित भएन । गुप्तालाई आयोगले निम्न माध्यामिक तहका लागि नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि रिक्त स्थानमा कोइरालालाई ल्याउनुपर्नेमा अधिकारीलाई ल्याइएको हो ।
गुप्ताले कलैयाकै मदरसा उच्च माविमा निम्न माध्यामिक तहका लागि नियुक्ति लिएकी थिइन् ।
२०७१ असोज ३० गते ६:५० मा प्रकाशित
सात लाख भूकम्पपीडितको दशैं यो वर्ष पनि टहरामै
ओलीको तीनवर्षे कार्यकालः राजनीतिक मुद्दामा एकजुट, कार्यशैलीमा प्रश्नै–प्रश्न
धनुषाको मिथिलामा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन पराजित, एमाले विजयी
कांग्रेस सांसद अमरेशको नगरमा राजपाको जीत
घेराबन्दीमा पर्‍यो एमाले, एक्लिए केपी ओली !
सप्तरीमा माओवादी किन बढारियो ?
माधव नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा एमाले पत्तासाफ !
रक्सीको नसामा खुलेआम अश्लील कार्य, सरकारले ल्यायो ६४ कानून
साहरुखकी हिरोइनसँग रणवीरको डेटिङ
पूर्वप्रेमी जोनलाई विपाशाले के भनिन् यस्तो ?
६० जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्छः देउवा
१ करोड रुपैयाँमा एक बोतल पानी !
नरहा गाउँपालिका जितेर सिरहामा एमालेले खाता खोल्यो